I-Isobel 's on Scarborough- indlu esemaphandleni enelanga netofotofo - I-Airbnb
I-Isobel 's on Scarborough- indlu esemaphandleni enelanga netofotofo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAlex
I-Isobel ikufutshane kakhulu neHanmer Heritage Forest entle apho uza kufumana khona ukuhamba emahlathini kunye nemizila yeMTB. Kufutshane nekona (iimitha eziyi-500 okanye ii-5mins uhamba ngeenyawo!) ziivenkile zaseVillage ezineevenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, iimpahla kunye neevenkile zezipho zokuzulazula. Ukubona iintaba ezintle ngaphandle nje kwefestile yegumbi lokulala.
Iipuli zeHanmer Springs thermal kunye neSpa luhambo olufutshane oluya endleleni. I-Isobel 's itofotofo kwaye ifudumele, ixabiso elihle, ilungele abantu abathandanayo okanye abahambi abahamba bodwa kwaye unokuza nezilwanyana zakho (izinja).
Indlu yabucala, endala i-kiwi bach/ indlu esemaphandleni. Iyathandeka kwaye ifudumele xa ilanga lingena. Umatshini omtsha wokufudumeza/umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu. Indlu esemaphandleni yi-1939 enezinto ezithile eziphuculiweyo kodwa nceda ulindele ‘ubuntu‘ kunye nendawo yokuhlala etofotofo endaweni ye-motel. Nceda ufunde inqaku elikwindlu yangasese ezantsi.
Le ndlu isemaphandleni ibalungele abantu abathandanayo okanye abathandanayo abanomntwana omnye omncinci (nceda uze nebhedi yakho kunye nezinto zokondlula ibhedi). Ikhuselekile kwaye ibiyelwe ngokupheleleyo kubantwana abancinci kunye nenja yentsapho yakho ukuba ungathanda ukuza nayo. Izinja zingangena ngaphakathi kodwa nceda zingangeni kwifenitshala okanye ebhedini.
Izinto zebhedi ziqukiwe- amashiti, iitawuli, itawuli yezandla, imethi yokuhlamba, iitawuli zeti.
Uza kukhawuleza uyicoce uze uyishiye indlu esemaphandleni ngale ndlela ubuyifumene ngayo, enkosi :) Senza oku ukuze kungafuneki ubhatale imali eyongezelelekileyo yokucoca! Siza kulungisa size sitshintshe ilinen esetyenzisiweyo.
Kubalulekile ukuba kufundeke!! Nceda wazi ukuba indlu yangasese yahlukile kwindlu. Idityaniswe nge-verandah ngaphandle nje komnyango wangaphambili. Indlu yangasese entsha necocekileyo, enezinto ezininzi kodwa iza kuba luhambo olubandayo ebusika! Igumbi lokuhlambela (ishawa nezitya zokuhlamba) lingaphakathi, ngaphandle kwegumbi lokulala.
4.54 out of 5 stars from 404 reviews
4.54 · Izimvo eziyi-404
Iikhilomitha eziyi-500 ukuya kwiivenkile zokutyela, iivenkile kunye neepuli ezinamanzi ashushu i-Isobel ikwindawo entle. Kwisibalo sam sokugqibela kukho iindawo eziyi-30 ezahlukeneyo zokutya eHanmer Springs! Ezona zintandokazi zethu zezi:
-iThai kunye neTshayina Takeaways- uMnumzana Yunan. Iikhilomitha eziyi-200 kuphela ukusuka endleleni!
- Ukutya kwaseIndiya okuchanileyo- iSpice Village okanye ukuzikhupha
-Ikofi, iti yasekuseni okanye isidlo sakusasa- Ivenkile Yokutyela
Yombane -Fine Dining- No. 31 Restaurant
-I-Bar/isidlo se-Pub- Abangcwele benza i-pizzas enkulu. NgoLwesihlanu 2 kwi-pizzas eyi-1
kwi-Bean eyosiweyo Siyathemba ukuba uza kuhlala ixesha elide kangangokuba uza kuzizama zonke! :)
I-Isobel iqhutywa njengekhaya leholide kwi-Airbnb nakwezinye iiwebhusayithi ze NZ. Nceda ungene uze uzenze ube sekhaya. Sihlala kwindlu enkulu ekwindlu enye ibe sizama ukuyigcina isemaphandleni isetyenziswa nguwe wedwa kangangoko kunokwenzeka. Ukuba kufuneka udibane nathi okanye ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho ungandithumelela umyalezo kwaye ndiza kukwazi ukukunceda ngezicelo ezininzi ngexesha lokuhlala kwakho.
I-Isobel iqhutywa njengekhaya leholide kwi-Airbnb nakwezinye iiwebhusayithi ze NZ. Nceda ungene uze uzenze ube sekhaya. Sihlala kwindlu enkulu ekwindlu enye ibe sizama ukuyigcina i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hanmer Springs